Football Khabar » वान म्यान आर्मी : रोनाल्डो एक्लैको ४९ प्रतिशत गोल !
वान म्यान आर्मी : रोनाल्डो एक्लैको ४९ प्रतिशत गोल !
इटालियन क्लब युभेन्टसका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लबका लागि निर्णायक र महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन्, यसमा दुईमत छैन । उनी आगामी फेब्रुअरी महिनामा ३६ वर्ष पुग्दैछन् । तर, उनी अहिले पनि उच्च लयमा खेलिरहेका छन् । रोनाल्डोको व्यक्तिगत प्रदर्शन यतिबेला उनी इटाली सरुवा भएपछिको सबैभन्दा उत्कृष्ट अवस्थामा छ ।
भलै, उनको टिम अहिले घरेलु सिरी ए लिगमा कमजोर अवस्थामा छ । साबिक विजेता युभेन्टस १३ खेलपछि मात्रै २४ अंक बनाएर छैटौं स्थानमा छ । च्याम्पियन्स लिगमा युभेन्टस समूह विजेता बनेरै अन्तिम १६ मा पुगेको छ । यी दुवै प्रतियोगितामा रोनाल्डोले व्यक्तिगत रूपमा राम्रो गरेका छन् ।
वर्ष २०२० रोनाल्डो र उनको टिममा लागि सकिएको छ । दुई दिनअघि सिरी ए लिगमा घरेलु मैदानमा फियोरेन्टिनासँग आफ्नो घरमा ०–३ ले हारेको खेल युभेन्टसका लागि वर्ष २०२० को अन्तिम खेल थियो । उसले अब आगामी खेल २०२१ को पहिलो सातामा मात्रै खेल्नेछ ।
फुटबलको तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्ने चर्चित संस्था ‘ओप्टा’ का अनुसार रोनाल्डो वर्ष २०२० मा युभेन्टसका लागि ‘वान म्यान आर्मी’ देखिएका छन् । उनले यस वर्षभरि व्यक्तिगत रूपमा गरेको गोल र असिस्ट संख्याले यसलाई साबित गर्छ ।
तथ्यांकअनुसार वर्ष २०२० मा युभेन्टसले गरेका कूल गोलमध्ये रोनाल्डो एक्लैले कूल ४९ प्रतिशत गोल गरेका छन् । जबकि कि, यो निकै शानदार तथ्यांक हो । युभेन्टसका सिंगो टिमका खेलाडीले गरेका कूल गोलमध्ये रोनाल्डो एक्लैले करिब आधा नै गोल गरेर टिमलाई काँधमा बोकेर हिँडेको देखिन्छ । उनी क्लबका सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी हुन् ।
त्यसैगरी, वर्ष २०२० मा रोनाल्डो युभेन्टसका लागि सबैभन्दा धेरै गोलमा योगदान दिने खेलाडी हुन् । उनले यस वर्ष युभेन्टसकाल लागि ४१ गोल र ७ असिस्ट गरे, समग्रमा ४८ गोलमा योगदान । र, यो अन्य कुनै पनि खेलाडीको भन्दा बढी हो । यता, वर्ष २०२० मा रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि ६ खेलबाट ३ गोल र २ असिस्ट गरे ।
प्रकाशित मिति ९ पुष २०७७, बिहीबार १९:२४